IsiShayina yokwelapha ukudla - Shijiazhuang Yiling Isibhedlela
IsiShayina yokwelapha ukudla (obizwa nangokuthi umsoco yokwelapha kanye therapy wezokudla) imodi ngokuzincisha ukudla sisekelwe izinkolelo Chinese ngokuphathelene imiphumela ukudla oku umzimba womuntu, futhi igxile imiqondo ezifana ukudla ngokulinganisela. iziyalezo wayo eyisiqalo ukuxuba Folk ukubukwa kanye imiqondo ethathelwe yesintu yamaShayina.
Sekuyisikhathi eside therapy Ukudla kube ezivamile indlela empilweni phakathi kwabantu.
Ukudla njengoba ingxenye ebaluleke kakhulu ekuphileni, ngokwezinga elikhulu, kuthinta impilo yethu. Ukuze kubantu abaphethwe isifo, Ukudla kubaluleke kakhulu. Ukuze iziguli zethu, nsuku zonke indlela odla ngayo umgomo at ekuthuthukiseni yokutakula ngokomzimba, ngenkathi ukulungisa umzimba, ukuze umzimba ingabuyiswa esimweni engconywana ngokushesha ngangokunokwenzeka, ukuze sifinyelele kangcono ukwelashwa umphumela.
IsiShayina yokwelapha ukudla has nethonya elikhulu umdlavuza ekwelapheni, scleroderma, yoma kwemisipha, rheumatism, motor neuron isifo, fibromyalgia, isifo sikashukela, nephropathy, kanye nezinye izinhlobo izifo futhi ezimweni ezimbi kakhulu.
Bheka ochwepheshe imibuzo ethize.